Wararka - Saamaynta daryeelka maqaarka ee saliidaha lagama maarmaanka ah ee qaybaha kala duwan ee jidhka
Saliidaha lagama maarmaanka ah waa nuxurka dhirta laga soo saaray ubaxyada dabiiciga ah ee saafiga ah, caleemaha, diirka, abuurka, laamaha iyo qeybaha kale, iyo moleculeyaasha udugga ah ee dhirta. Sifooyinka dhirta saafiga ah waa la ilaaliyaa iyada oo aan lagu darin iskudhafyo aan dabiici ahayn. Waxay leedahay saameyn gaar ah maqaarka, jirka iyo nafta.
Miisaanka maadada ee saliida lama huraanka ah waa 1/3000 oo unugyada dhirta ah, taas oo 1000 jeer ka yar unugyada aadanaha. Waxaa si fudud u nuugaya maqaarka. Waxay ku gaarto epidermis-ka 1 daqiiqo, maqaarka maqaarka 2 daqiiqo, iyo nidaamka wareegga dhiigga ee 10-15 daqiiqo. Isla mar ahaantaana maqaarka, wuxuu kaloo daaweyn karaa maqaarka gudaha.
Saliidaha lagama maarmaanka ah ayaa wajiga loo isticmaalaa si loo nadiifiyo loona qurxiyo maqaarka. Xusuusnow inaad ku milo saliida salka ah ka hor intaadan wajiga marin. Qiyaasta kala-badhnaanta badqabka waa 1-5 dhibcood oo saliid muhiim ah oo saafi ah iyo 5ml (qiyaastii 100 dhibcood)
Guud ahaan, ubaxyo, ubaxyo liin dhanaan ah iyo liin dhanaan ayaa badanaa loo isticmaalaa caddeynta wajiga iyo dayactirka. Fooxa iyo ubaxyada waxaa badanaa loo isticmaalaa anti-gabowga. Budada iyo rosemary waxaa badanaa loo isticmaalaa astringent iyo adkeyn lavender, geed shaah ama geranium ayaa lagula talinayaa maqaarka dufanka leh iyo midka dhibaatada leh!
2. Daanka bidix iyo salka dhakada:
Dalbashada labadan qaybood waxay kaa caawin kartaa isbedelka niyadda iyo isu dheelitirka shucuurta. (Masawirka jilicsan ayaa si ula kac ah ama qumman u laalaada salka carrabka wuxuuna ka kooban yahay fidinta muruqyada faleetin palatine iyo muruqyada kale. Waa qeyb ka mid ah unugyada kala soocaya daloolka afka iyo xiiqda, sidaas darteed waxay leedahay shaqada kala soocida habka neefsashada iyo habka dheef-shiidka.Gunta hoose ee daloolka cranial (Waxaa loogu yeeraa salka dhakada, taas oo ah qayb caafimaad ahaan muhiim u ah)
Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho fooxa, sandalwood, patchouli iyo malmalka.
3.Neck, foodda hore iyo macbudyo:
Marka xiisad ka jirto madaxa iyo qoorta, saliidaha lagama maarmaanka ah ee seddexdan qaybood ayaa kaa caawin kara yareynta!
Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho lavender, mint iyo frankincense!
Codsiga saliidaha lagama maarmaanka ah ee xabadka waxay dhiirrigelin kartaa socodka habsami leh ee hawo-mareenka waxayna gacan ka geysaneysaa ilaalinta neef, caafimaad leh, nadiif ah!
Soo jeedi saliidaha lagama maarmaanka u ah oksaydhka: Eucalyptus iyo rosemary, si habsami leh u neefso!
Saliidaha lagama maarmaanka ah u mari caloosha, gaar ahaan xubnaha ugu waaweyn ee dheef-shiidka, si ay uga caawiso dheef-shiid kiimikaad caafimaad leh una yaraato raaxo-darrada mararka qaarkood dheefshiidka.
Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho saliidaha lama huraanka ah ee sinjibiil, koryander, fennel macaan iyo basbaaska madow.
Saliidaha lagama maarmaanka ah u mari beerka si ay uga caawiso sunta iyo nadiifinta una taageerto nadiifinta iyo nadiifinta shaqada xubnaha jirka.
Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho liin, canab, geranium iyo juniper.
7 Arms, lugaha iyo dhabarka:
Codsashada saliidaha lagama maarmaanka ah si loo duugo gacmaha, curcurada, lugaha, dhabarka iyo cagaha cagaha waxay kaa caawin kartaa yareynta unugyada muruqyada ee daalka iyo xanuun badan, waxayna kobcinayaan wareegga dhiigga.
Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho saliida cagaarka, liinta cagaaran, iyo beroosh.
Codsashada cagaha cagaha waxay dhiirrigelin kartaa dhuuqitaanka degdegga ah ee saliidaha lagama maarmaanka ah, maxaa yeelay daloolada ku yaal cagaha cagihiisu way fududahay in la dhuuqo, taas oo caafimaad, badbaado leh oo si fudud loo nuugo saliidaha lagama maarmaanka ah. Cagaha cagaha waxaa badanaa loo arkaa inay yihiin isku xirnaanta xubnaha iyo xubnaha kala duwan ee jirka. Waxaa jira qaybo badan oo loo yaqaanno aagagga falcelinta. Badanaa kicinta aagagga jawaab celinta waxay u dhigantaa ku shaqeynta xubnaha ama xubnaha u dhigma. Ma sahlana in la xasuusto aag kasta oo milicsiga ka mid ah, kaliya saliidda lagama maarmaanka ah mari dhammaan cagaha oo dhan!
Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho niyadda deggan, fooxa, vetiver, ylang ylang